‘शेरबहादुर’ लाई दर्शकले के भने ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘शेरबहादुर’ लाई दर्शकले के भने ?
Published On : February 3, 2018
शुक्रवारबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र ‘शेरबहादुर’ लाई दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया मिलेको छ । सिनेमा घरहरुमा दर्शकको ठेलमठेल उपस्थिति नरहेपनि चलचित्र हेर्ने दर्शकले राम्रो बोलेका छन् । शुक्रवार ४५ प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको यो चलचित्रले शनिवार ६५ प्रतिशत माथीको अकुपेन्सी कायम गरेको वितरक गोपाल कायस्थले जानकारी दिए ।
शनिवार ८० प्रतिशत माथिको अकुपेन्सी अपेक्षा गरिएको भएपनि दर्शक सोचे जस्तो हलमा आएका छैनन् । कतिपय दर्शक आफैंले चलचित्र हलिउडको प्रभावमा बनाएको थाहा हुँदाहुँदै पनि हेरेको र नेपालमा पनि हलिउड जस्तै चलचित्र निर्माण हुनसक्छ भने विश्वास ‘शेरबहादुर’ बाट मिलेको बताएका छन् ।
शनिवार गोपिकृष्ण, अष्टनारायण लगायतका हलमा दर्शकहरु चलचित्रका प्रमुख कलाकार सुनिल थापा र रविन्द्र झासँग सेल्फी खिच्न व्यस्त देखिन्थे । ‘शेरबहादुर’ को दुईदिने कलेक्सन आइतवार दिउँसो मात्र सार्वजनिक गरिने वितरक कायस्थले जानकारी दिए ।
चलचित्रलाई आर राजवंशीले निर्देशन गरेका हुन् । धिराज प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्मित यो चलचित्रमा प्रमोद क्षेत्रीको कथा छ । चलचित्रमा गौरीशंकर धुनुजु र धिराज राजवंशीको लगानी रहेको छ ।
‘शेरबहादुर’ एक अवकास प्राप्त आर्मीको कथामा आधारित थ्रिलर जनराको चलचित्र हो । चलचित्रमा बरिष्ठ कलाकार सुनिल थापा, कर्मा, रविन्द्र झा, मेनुका प्रधान लगायतका कलाकारहरुको प्रमुख भूमिका छ ।
‘जात्रा’ निर्देशक प्रदीप भट्टराईको सह-निर्देशन रहेको चलचित्रका सिनेम्याटोग्राफर दीर्घ गुरुङ हुन् ।
टिकटकबाटै कमाउने वर्षा
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष आफू अनुबन्ध भएको चलचित्रको छायांकन नहुँदा अभिनेत्री वर्षा राउतका लागि
आगलागीले ध्वस्त भएको म्याजिक हल साढे २ करोडमा फेरि ठडियो
गत भदौ १२ गते विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको सुनसरीको झुम्का रामधुनीस्थित म्याजिक सिनेमा हल
दुई वर्षपछि चलचित्रको छायांकनमा वर्षा
२०७६ सालमा अभिनेत्री वर्षा राउतले दुई हप्ताको अन्तरमा दुई चलचित्र ‘दुई नम्बरी’ र ‘के घर